कलिला खुट्टामा जब प्रहरीको लाठी बर्सियो… (फोटो फिचर) « Dainiki
२३ मंसिर २०७६, सोमबार ०८:०३
कलिला खुट्टामा जब प्रहरीको लाठी बर्सियो… (फोटो फिचर)
२३ मंसिर, काठमाडौं । बाँकेको कोहलपुर आइतबार रणमैदान बन्यो । पढ्न गएका विद्यार्थीका खुट्टामा प्रहरीका लौरो बर्सिए । रबरका गोली प्रहार गरिए । प्रहरीले स्कुले विद्यार्थीका कलिला खुट्टामा छामी-छामी कटबाँसको लौरो बर्साइरह्यो । वरपरका रमितेहरु रमिते नै बने । तिनै जनतालाई सुरक्षा दिन खटिएका प्रहरीको ज्यादति विद्यार्थीमाथि एकोहोरो रुपमा भइरह्यो ।
विद्यार्थीहरु त्यो पनि माध्यमिक तहका । कलेज पढ्ने विद्यार्थी भए त राजनीति गरे भन्ने हुन्थ्यो । ती कक्षा ५ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीले पढुन् कि राजनीति गरुन् ।
हुन त प्रहरीले ती विद्यार्थीलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नै ठाने या दुस्मन । लाठी बर्साइरहे । धेरै बिहानै पढ्न भनेर स्कुल आएका विद्यार्थीलाई शिक्षकले त पढाउन पाएनन्, पाएनन् तर लाठीको पढाइ भने प्रहरीले गज्जबसँगै पढाइदियो ।
प्रहरीको नजरमा ती अवोध बालबालिका अपराधी जस्तै देखिन्थे । जसले आफ्ना साथीलाई ट्रकले ठक्कर दिएर घाइते बनाएको विरोधमा प्रदर्शन गरे । अनि शान्ति अनुभूत गराउन प्रहरी जाइलाग्यो । यही माघ अन्तिम सातासम्मको जागिर रहेको प्रहरीका मुख्य व्यक्ति भनौं या महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालले त झन् के थाहा पाउनु । उनी त हेडक्वार्टरमा क्वाटर तान्दै पो बसेका थिए कि ?
नत्र कलिला विद्यार्थीका शरीरमा त्यो कटबाँसको लौरो, रबरका गोली बर्सिंदा त्यसो नगर है भनेर आदेशसमेत दिन सकेनन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको लाचारी त झन् छताछुल्ल नै बन्यो न उनले विद्यारीमाथि दमन नगर्नु भन्न सके न उनी मातहतका प्रहरीको उदण्ड पराक्रम रोक्न सके । कोहलपुर क्षेत्रमा आतंक मच्चाइरहे । जनता, विद्यार्थी पीडित भइरहे ।
यसरी निहत्था विद्यार्थीमाथिको अमानवीय व्यवहार प्रति न आईजीपी खनालले २ शब्द खर्चिए न त गृहमन्त्री थापाले नै । एउटा हातमा किताब बोकेका कक्षा ६ मा पढ्ने छात्राले नपिट्न आग्रह गर्दा-गर्दै पनि प्रहरीसामु त्यो याचना निरिह साबित भयो । दर्जन बढी घाइते भएका विद्यार्थी उपचारका लागि अस्पताल लगिएका छन् । यो चोट कहिलेसम्म बल्झिएला यसको हेक्का थापा, खनालहरुले गर्ने कि नगर्ने ? ती कलिला विद्यार्थीको मानसपटलमा प्रहरी भनेको के हो भन्ने कुराको छाप कस्तो रहला कसैले हेक्का गरेको छ र ?
यो घटनाले सिंगो मुलुक स्तब्ध भएकाबेला गृहमन्त्री र आईजीपी हाइसुख्खले आफ्नै धूनमा छन् । सामाजिक सञ्जालमा यी तस्बिर भाइरल भएका छन् । प्रहरीको असलियत उदांगो भएको छ । प्रहरीले झडप नियन्त्रण गर्ने नाममा अश्रुग्यास प्रहार गर्ने, विद्यार्थी मरणासन्न हुने गरी गोली चलाएको तथा बालबालिकामाथि बल प्रयोग गरेको घटनाको विभिन्न संघ-संस्था, व्यक्ति, नागरिक समाजले घोर निन्दा र भर्त्सना गरेका छन् ।
कोहलपुरस्थित त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत प्रगति चन्दलाई आइतबार बिहान कोहलपुरबाट नेपालगन्जतर्फ जाँदै गरेको ना.२ख ९४५९ नम्बर ट्रकले विद्यालयकै अगाडि ठक्कर दिँदा उनको दुवै खुट्टा भाँचिएको थियो ।
सबै तस्बिर : सामाजिक सञ्जालबाट लिइएका हुन् ।
यो घटनापछि आक्रोशित विद्यार्थीले ट्रकमा ढुंगामुढा गरेको निहुँ पाएपछि प्रहरीले विद्यालयभित्रै पसेर विद्यार्थी कुटेर बहादुरी देखाएको थियो । जसलाई हामी यी तस्बिरहरुमा समेत देख्न सक्छौं ।